CINEMABEIRO gosipụtara na A Coruña - World March
Home » Noticias » Pịa Ihe edeturu » A na-enye CINEMABEIRO iwu na A Coruña
A na-enye CINEMABEIRO iwu na A Coruña
30 / 09 / 2020 site Antonio Gancedo
A ga-eme "I Mostra de Cinema pola Paz e la Nonviolencia", CINEMABEIRO, Ọktoba 2, 3 na 4
“I Mostra de Cinema pola Paz e la Nonviolencia”, CINEMABEIRO, ka emerela na Septemba 29, 2020 a na City Hall nke A Coruña.
Ndi Mundo sen Guerras e sen Violencia haziri ya na mmekorita ya na ndi oru iri na isii na ndi otu ndi mmadu, nkwado nke EMALCSA Foundation na mmekorita nke A Coruña City Council, a ga-eme ya n’onwa iri nke abuo n’onwa iri nke ato na nke ato site na iji uzo abuo: mkparita uka na ntanetị. ihu ihu na ihu na ụlọ La Domus dị na A Coruña.
María Núñez, onye nduzi mmemme CINEMABEIRO, egosiri dị ka ebumnuche nke Mostra "ịmara ọha na eze na nkatọ nke esemokwu na-eto eto ma nye ndị mmadụ olu ọdịbendị nke ime ihe ike".
Yoya Neira, Onye ndụmọdụ maka ọdịmma ọha na eze nke A Coruña City Council, kwusiri ike na "A Coruña ga-abụ akara ngosi maka ịkwanyere na iwu nke ikike mmadụ site na ọdịbendị."
Dị ka ndị nhazi ya si kwuo, “A mụrụ CINEMABEIRO site na mkpa ịmepụta ihe omume raara nye maka ịkwalite, ịtụgharị uche na ịtụle ihe gbasara ikike mmadụ, ọ bụghị naanị n’obodo A Coruña kamakwa na Galicia.
Ngwaọrụ dị oke mkpa iji kọọ ma mee ka ime ihe ike pụta ìhè
Ihe nkiri bụ ihe dị ezigbo mkpa iji katọọ ma mee ka a hụ ihe ike a na-eme na ikike anyị. Ọ bụ windo na-eme ka anyị mata ihe ndị ọzọ; onye na-ekwu okwu ịbọ ọbọ nke na-achịkọta anyị ma na-eme ka nghọta anyị banyere ụwa site na itinye onwe ya n'ihe ndị ruuru mmadụ. "
Ha gara n'ihu ịkọwa:
“CINEMABEIRO bụ ikpo okwu maka mgbasa nke ụdị ihe nkiri sinima ọzọ, yana nghazi nghazi ọha na eze, nke ebumnuche iji mee ka ọha na eze bịaruo nso dịka nsogbu enweghị ọrụ, mpụga, ime ihe ike nwoke na nwanyị, mgbanwe ihu igwe, ịha nhata na nsonye.
CINEMABEIRO, Aims na-a pụrụ iche Ememme
Mbipụta nke 1 nke CINEMABEIRO ga-abụ ihe ngosi maka ihe nkiri kacha mma nke Ihe Ndị Ruuru Mmadụ, na-enye nhọrọ nlezianya nke ihe nkiri vidio na obere ihe nkiri na nso nso a, yana ọtụtụ ememme kachasị mma n'ụwa.
Na mbipụta izizi a nke "Mostra Internacional de Cinema pola Paz Cinemabeiro" o nwere na mmemme ya ihe nkiri anọ nwere njirimara, mkpụmkpụ iri na isii na tebụl mkparịta ụka ise nke, n'ihi nsogbu COVID-19, ga-eme n'ịntanetị, na nsonye nke ndị ọkà okwu. Ndi otu ndi otu ndi otu ndi otu ndi otu ndi otu na achota nsogbu ndi a:
Ihe isi ike nke ibi n'ala ọzọ na ikike ịkwaga
Nwanyi na nne: na-ajuju usoro omumu heteropatriarchal
Ikike agụmakwụkwọ maka ndị nwere nkwarụ arụmọrụ yana nke ọgụgụ isi, nsogbu uche yana n'ihe egwu nke mwepu mmadụ
Mgbanwe ihu igwe na ndakpọ nke ọchịchị onye kwuo uche ya dịka nnukwu ihe iyi egwu na mbara ụwa anyị
Discriminationkpa oke nke nwoke na nwanyị, nnukwu ihere nke ndị mmadụ n'ihe egwu nke ikewapụ mmadụ
A ga-emecha ya na ọtụtụ ajụjụ ọnụ nke redio na ndị na-emepụta ihe gụnyere, nke sitere na mkpakọrịta nke ndị nne na nna nke ndị nwere ọrịa ụbụrụ (ASPACE) Coruña na mmemme ya 'La radio de los Gatos'.
CINEMABEIRO, maka Mundo sen Guerres e sen Violencia, bụ akụkụ nke mkpọsa n'afọ a + Peace + Nonviolence - Ngwá Agha Nuclear nke a na-eme na ọkwa mbara ala na ọtụtụ ọrụ n'etiti Septemba 21, 2020 ruo Ọktọba 2, 2020.
Akwụkwọ ozi nkwado maka TPAN